Volamena : mbola lavitry ny zava-misy ny antontanisa azo | NewsMada
Volamena : mbola lavitry ny zava-misy ny antontanisa azo
Tamin’ny fanjanahantany no nahafantarana fisian’ny vokatra volamena 3 t. Taorian’ny fahaleovantena, mahamenatra ny filazana ny volamena azo nambara ofisialy, ampolony kilao kely monja, tsy araka ny misy eto Madagasikara. Ho fanarenana izany ny anton’ny ny atrikasa, omaly sy anio, ao amin’ny Hotely Panorama.
Taona maro nifanesy taorian’ny fahaleovantena, ampolony kilao kely monja ny voalaza, araka ny tatitra ofisialy. Ny taona 2016, vao nahitana antontanisa be indrindra 580 kg, naondrana any ivelany, noho ny ezaka efa natao teo anivon’ny Ivotoeram-pirenena misahana ny sehatry ny volamena (Anor). Telo volana voalohany ny taona 2017 ity, efa mba tafakatra 836 kg izany. “Na izany aza, tena mbola lavitry ny zava-misy eto Madagasikara ireo antontanisa ireo”, hoy ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Zafilahy Ying Vah, nanokatra ny atrikasa.
Dingana iray amin’ny tanjona enjehina, ny fampidirana ireo mpitrandraka madinika ao anatin’ny ara-dalàna. “Amin’izao fotoana izao, tombanana 500.000 ny isan’ny mpitrandraka madinika manerana ny Nosy, nefa tsy azo atao ny misakana azy ireo, mba tsy hahavery antom-pivelomana azy ireo na sanatria hironana any amin’ny asan-dahalo”, hoy ihany ny minisitra. Manoloana izany, tsy maintsy nozahana izay sakana rehetra amin’ity lalam-pihariana lehibe iray ity, izay tsy ahazoan’ny vahoaka sy ny firenena tombony, na efa misy aza ny “vokatra kely tsara hita”.
Fihariana anjakan’ny kolikoly
Iaraha-mahalala fa seha-pihariana iray anjakan’ny kolikoly sy fanondranana an-tsokosoko ny volamena ; betsaka ny fanambakàna ataon’ireo mpanangom-bokatra amin’ireo mpitrandraka madinika ; tsy mampazoto ny maro ny maka karatra sy mangataka fahazoan-dalana hitrandraka, tsy miditra ny hetra na haba ho an’ny kaominina nivoahan’ny volamena ; tsy ampy ny fanentanana ; efa lany andro, tsy araka ny vanim-potoana ankehitriny sy fivoaran’ny teknolojia ny lalàna momba ny harena an-kibon’ny tany, indrindra ho an’ireo mpitrandraka madinika.
Noho ny fahitana ireo olana isan-karazany ireo sy ny maro hafa, niantsoana izay voakasika rehetra, mivantana na tsia, amin’ity lalam-pihariana volamena ity. Manomboka any ifotony, fokontany, kaominina, faritra, fikambanana sy ny ONG samihafa, Banky foibe. Manana andraikitra ny minisitera maromaro, toy ny Fitantanam-bola, Atitany, Varotra, Fiarovana. Andrasana ny fehin-kevitra avy amin’ireo mpandray anjara rehetra ireo ho fanatsarana ny lalam-pihariana volamena.